धेरै वर्ष कसरी बाच्ने ? वैज्ञानिकको यस्तो दाबी ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
धेरै वर्ष कसरी बाच्ने ? वैज्ञानिकको यस्तो दाबी !
अमेरिकी वैज्ञानिकले लामो उमेर र स्वस्थ कसरी रहिन्छ भन्ने कुराको रहस्य बताएका छन् । वैज्ञानिकले रातमा सुत्नेबेला भन्दा पहिला आफ्नो रिस नष्ट गर्न सुझाएका छन् । झगडा बिर्सिएर दिमाग शान्त गरेपछि सुत्यो भने लामो समयसम्म मानिस बाच्न सक्ने र स्वस्थ रहनसक्ने वैज्ञानिकको दाबी छ । यो दाबी अमेरिकाको ओरेगन स्टेट यूनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले आफ्नो रिसर्चबाट गरेका हुन् ।
झगडा त्यहि दिन बिर्सनुहोस्
रिसर्चका अनुसार यदि तपाईले दिनको अन्त्यसम्म झगडा बिर्सिन सक्नुभयो भने, यसको असर अर्को दिन पर्दैन । यदि तपाईले दिमागमा नेगेटिभ कुरालाई हाबी हुनबाट रोक्नसक्नुभयो भने, मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ । तर यसको बिपरित भएमा यसको असर तपाईमै पर्छ ।
नेगेटिभ कुरा बिर्सिनेमा वृद्धवृद्धा धेरै
यो रिसर्च २०२२ जना मानिसमा गरिएको थियो । यसमा ३३ देखि ८४ वर्ष उमेरका मानिस सहभागी थिए । ८ दिनसम्म हरेक मानिससँग यसको फिलिङ र एक्सपीरियन्सको बारेमा सोधिएको थियो । शोधकर्ताहरुको टीमले औसतमा ४५ वर्षका मानिसको तुलनामा वृद्धवृद्धाले छिटै नेगेटिभ कुरा बिर्सिएको पाइएको हो ।
तनाव कम गर्ने प्रयास आवश्यक
शोधकर्ता रोबर्ट तावस्की हरेक मानिसलाई कुनै न कुनै बेला तनावको सामना गर्नुपरेको र यसलाई रोक्न नसकिने बताउँछन् । तर यसलाई केहि हदसम्म नियन्त्रण भने गर्न सकिने र स्वस्थ रहन सकिने बताउँछन् ।